एमाले र माओवादी पार्टी एकता हुनेमा कुनै शंका छैन -एमाले नेता घर्ती
नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि रोल्पाबाट सिफरिस भएका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल घर्तीमगर, एमाले र माओबादी बिचको चुनाबी तालमेल पछि ब्याक भए ।
उनी संयुक्त बाम गठबन्धन रोल्पाबाट चुनाबी संयोजक भए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भारी जनमतका साथ बिजयी बनाउनेमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका घर्तीमगर अनेरास्वबियुका पुर्ब महासचिब समेत हुन । एमाले युबा नेता उनै गोकुल घर्तीमगर संग पत्रकार महासंघ राेल्पाका सचिव जीवन डाँगीले गरेको कुराकानी :
बाम गठबन्धनको नतिजा प्रति तपाईको प्रतिकृया ?
– गठबन्धनले पाएको परिणमले नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र बिच पार्टी एकताको ढोका खोलेको छ । दुई पार्टी बिचको तालमेलमा जनताले दिएको जनमत उत्साहजनक छ । बाम शक्ति प्रति आम नागरिकको निकै अपेक्षा छ । त्यसकारण पनि हामीहरु देशको समृद्धिका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैनौँ ।
तपाई चुनाबी संयोजक रहेको, रोल्पा जिल्लाको मत परिणम कस्तो आयो ?
– स्वभाबिकै रुपले रोल्पा जिल्लाको मत परिणम सन्तोष आएको छ । एमाले र माओबादी बिचको तालमेलले पक्कै पनि रोल्पाली जनहरुमा निकै खुसियाली छाएको थियो । रोल्पा जिल्ला बाम शक्तिहरुको किल्ला बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा तर्फ कमरेड बर्षमान पुन र प्रदेश कबाट कमरेड कुलप्रसाद केसी यसैगरि प्रदेश खबाट कमरेड दिपेन्द्र पुनले भारी जनमतका साथ जित्नु भएको छ । म तिनै जनालाई बधाई पनि दिन्छु । हामीले यस जिल्लाका जनतालाई रातो झण्डामुनी गोलबन्ध गरेका छौ । रातो झण्डामा यस अर्थपनि सहि छ कि समृद्ध रोल्पा, सुखि रोल्पालीको गठबन्धनले परिकल्पना गरेको छ ।
यसपटक जनप्रतिनिधि बन्नु भएन, यहाँको कतै अपेक्षा छ की ?
– म जनप्रतिनिधिनै हु ? किन की मैले गर्ने हरेक काम जनता संग सम्बन्धित छन् र हुन्छन । मलाई लाग्छ तपाई उम्मेदवार किन नभएको भन्ने नै होला ? नेपाली जनताको भरोसा बाम शक्ति बिच पार्टी एकता हुदै छ । पार्टी एकता अघि चुनाबी तालमेल भयो । त्यसपछि म ब्याक भए । रोल्पाबाट कमरेड बर्षमान, कुलप्रसाद र दिपेन्द्रलाई भारी मतका साथ जिताउनेमा मेरो नेतृत्वको चुनाब परिचालन कमिटिको महत्वपुर्ण भुमिका रह्यो ।
अर्को प्रश्न अपेक्षा भन्नुभयो – मेरो कुनै पनि पदमा दाबी छैन । पार्टीले जहाँ जिम्मेवारी दिन्छ, त्यहाँ कुरा गछु । पार्टीले जहाँ मेरो महसुस गर्छ, म त्यहीँ हुन्छु ।
प्रदेश नं. ५ मा मुख्यमन्त्रीको होडबाजी सुरु भयो ? मुख्यमन्त्री को ?
– यो बिषय बहस गर्न जरुरी देख्दिन्न । किन की कमरेड केपि ओली र कमरेड प्रचण्ड बसेर टुङगाएको बिषयमा अहिले आएर जुहारी खेल्न आबश्यक छैन ।
मतलब – शंकर पोखरेल भन्नुभयो ?
– स्पस्ट छ, अरुले पनि आकांक्षा र दाबी गर्न त पाए तर मुख्यमन्त्री चाहीँ कमरेड शंकर पोखरेल नै हुुनुहुन्छ ।
एमाले र माओबादी बिच पार्टी एकता हुन्छ ?
– पार्टी एकता हुनेमा कुनै शंका छैन । अबस्य पनि एमाले र माओबादी बिचको एकता सरकार बनेपछि देख्नुहुन्छ ।